လူကြီးများအတွက်ဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်လိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုအသုံးပြုခြင်းအကြားဆက်ဆံရေး (၂၀၁၇) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn တွင်
Andrea Sansone, MD Massimiliano Sansone, MD PsyD, Marco Proietti, MD Giacomo Ciocca, PsyD, Ph.D, Andrea Lenzi, MD Emmanuel အေ Jannini, MD Francesco Romanelli, MD
ဗီဒီယိုဂိမ်းအသုံးပြုမှုအားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးလူ ပို. ပို. ပျံ့နှံ့နေတဲ့ဖြစ်ပါသည်, နှင့်လူ့ကျန်းမာရေးအတွက်အီလက်ထရောနစ်ဖျော်ဖြေရေးများအတွက်အခန်းကဏ္ဍသက်သေသိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထား၏ကျယ်ပြန့်သောငွေပမာဏရှိနေသော်လည်းဂိမ်းတွေကက၏အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကြားစပ်လျဉ်းအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့လူမှုကွန်ယက်များနှင့်တိကျသောဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတစ်ဆင့်စုဆောင်းသည်အသက်ကြီး 15 မှ 18 နှစ်, နှစ်ခုအတည်ပြုမေးခွန်း, အအချိန်မတန်မီသုက် Diagnostic Tool ကို (PEDT) နှင့် Erectile ရာထူးအမည်များ၏နိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်း (IIEF-50) အုပ်ချုပ်။ မေးခွန်းအပြင်, စေတနာ့ဝန်ထမ်းသူတို့ရဲ့ဂိမ်းကစားခြင်းအလေ့အထနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အပေါ်သတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။
ဂိမ်းကစားခြင်းအလေ့အထနှင့်သက်ဆိုင်ရာလူနေမှုအကြောင်းကိုဒေတာအပါအဝင် IIEF-15 နှင့် PEDT တစ်ခုတိုးချဲ့ဗားရှင်း။
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၁၈ ရက်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိအမျိုးသားများအသက် ၁၈ နှစ်မှ ၅၀ နှစ်အတွင်းအမျိုးသား ၅၉၉ ဦး ကမေးခွန်းလွှာများကိုဖြည့်စွက်ခဲ့သည်။ အမျိုးသားတစ်ရာကိုးဆယ့်ကိုးယောက်သည်လွန်ခဲ့သော ၄ ပတ်အတွင်းလိင်ဆက်ဆံမှုမပြုကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ လေးမှတ်တမ်းများကြောင့်မွေးရာပါအမှားအယွင်းများပယ်ချခံခဲ့ရသည်။ ကျန်ရှိနေသေးသောမေးခွန်း ၃၉၆ ခုကိုဆန်းစစ်လေ့လာခဲ့ပြီး ၂၈၇“ ကစားသမား” (ပျမ်းမျှတစ်နေ့လျှင်တစ်နာရီကစားသည်) နှင့်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုဖြန့်ဝေသည့်“ ဂိမ်းမဟုတ်သူများ” ၁၀၉ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂိမ်းကစားသူမဟုတ်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်မှုပျံ့နှံ့မှုကိုတွေ့ရှိရသည် (ဆိုလိုသည်မှာ PEDT ရမှတ် = 18 ± 2014 против 31 ± 2014, P <.05, အသီးသီး) ။ IIEF-15 အားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည် erectile function၊ orgasm function နှင့်အလုံးစုံကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနယ်ပယ်များတွင် gamers နှင့် non-gamers များအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုမရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒဒိုမိန်းအတွက်ပျမ်းမျှရမှတ်များသည်ဂိမ်းကစားသူမဟုတ်သူများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသည် (ပျမ်းမျှရမှတ် [interquartile range]9[8–9] vs9[8-10])၊ P = .0227) ။
ဤရလဒ်သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကြားဆက်စပ်မှုကိုထောကျပံ့။ Non-ဂိမ်းကစားနှင့်နှိုင်းယှဉ် 1 နာရီ / ရက်ထက်ပိုပြီးအဘို့ဂိမ်းတွေကကကစားယောက်ျားအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ရှိသည်ဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒလျော့နည်းသွားရှိသည်ဟုပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။
ဤသည်ဂိမ်းကစားအတွက်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကဲဖြတ်ရန်ရည်ရွယ်ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ PEDT နှင့် IIEF ရမှတ်များနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ဖော်ထုတ်; သို့သော်ဤတွေ့ရှိချက် Interventional လေ့လာမှုများမှတဆင့်အတည်ပြုလိုအပ်သည်။ ထို့အပွငျစေတနာ့ဝန်ထမ်းအရှင်စုဆောင်းမှုဘက်လိုက်မှု၏အန္တရာယ်တိုးမြှင့်, လူမှုရေးကွန်ရက်များမှတဆင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာဖို့, ဒီအထူးသ ejaculatory တုံ့ပြန်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများအတွက်အီလက်ထရောနစ်ဖျော်ဖြေရေးနှင့်အထီးလိင်အကြား link ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပထမဦးဆုံးစူးစမ်းလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။